स्वास्थ्य /जिबनशैली – Sandesh Press
May272022 by Usha Lama AdminNo Comments
किन बाथरूममा सबैभन्दा बढि हर्टअट्याक हुने गर्छ, यस्ताे छ कारण ….
किन बाथरूममा सबैभन्दा बढि हर्टअट्याक हुने गर्छ, यस्ताे छ कारण ! मानिसको लागि अहिले हर्टअट्याक गम्भीर समस्या बन्दै आएकाे छ । हर्टअट्याक अचानक हुन्छ तर यो खराब लाइफ स्टाइल र खानपानको कारण हुने गर्दछ । विज्ञानको आधारमा हेर्दा हर्टअट्याकको सम्बन्ध हाम्रो रगतमा हुन्छ। रगत मार्फत हाम्रो शरीरमा अक्सीजन र जरूरी पोषक तत्व पुग्छ। तर जब तपाईको हृदयसम्म अक्सीजन पुग्ने धमनिमा प्ला-क ज-मेको कारण रु-कावट पैदा हुन्छ, यस कारण मुटु धड्किने रफ्तार असन्तुलित हुन्छ। र यसबाट नै हामीलाई हर्टअट्याक आउने गर्छ । बाथरूममा हर्टअट्याक हुनुको धेरै कारण रहेको छ, यदि तपाईले यस बारेमा जानकारी पाउनुभयो भने आफु र आफ्नो परिवारलाई यसबाट सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। बिहानको समयमा बाथरूममा हर्टअट्याक किन आउँछ, यस्ताे छ कारण:- ​१) बिहानको समयमा हाम्रो ब्लड प्रेशर धेरै हुन्छ। यस्तैमा हामी जब नुहाउनको लागी अधिक चिसो वा तातो
May262022 by Usha Lama AdminNo Comments
गर्मी मौसममा लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनाउँछ । तर हामी मध्ये कतिपय यस्ता छौ जसलाई अन्यको तुलनामा लामखुट्टेले धेरै टोक्छ । तर किन त ? लामखुट्टेमा मानिस र जनावर भएको ठाउँ थाहा पाउने एक विशेष प्रकारको सेन्सर हुन्छ । यसैको मद्दतले यसले शिकारलाई खोज्दछ। यस अलावा अन्यको तुलनामा कसैलाई बढि लामखुट्टेले टोक्छ भने लामखुट्टेलाई के कुराले आकर्षित गर्छ त ? यी हुन् कारणः धेरै पसिना आउने मानिस प्रति लामखुट्टेलाई आकर्षित गर्दछ। लामखुट्टेलाई आवश्यक पर्ने सबैकुरा पसिनामा पाइन्छ। त्यसैले यो आर्कषित बन्दछ। महिलाको तुलनामा पुरुष र बच्चालाई र यी दुइको तुलनामा पनि वयस्कलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्ने गर्दछ। लामखुट्टे शरीरको तापक्रममार्फत आफ्नो शिकारको खोजी गर्दछ। मानिसको शरीरको तापक्रम लामखुट्टेका लागि आइडियल हुने गर्दछ। कालो, निलो, रातो जस्तो गाढा रङको कपडामा लामखुट्टे आकर्षित हुने गर्दछन्। बास्नाले पनि
May252022 by Usha Lama AdminNo Comments
काठमाडौँ । प्रायः मानिसहरू शरीरका ससाना समस्यालाई बेवास्ता गर्छन्। जस्तो, घरीघरी पिसाब आउनु। दिनमा पाँचचोटिसम्म पिसाब आएको ठीकै हो किनकि यसबाट मिर्गौला स्वस्थ रहेको जानकारी पाइन्छ तर १०–१५ चोटि आयो भने चाहिँ खतरनाक पनि हुन सक्छ। छिटछिटो पिसाब आउनु भनेको मधुमेहको पनि लक्षण हुन सक्छ। तपाईंलाई पनि यो समस्या छ भने चिकित्सककहाँ गएर जँचाइहाल्नुस् । तर यसका साथसाथै केही घरेलु उपाय अपनाउनुभयो भने पनि समस्याबाट मुक्ति पाउनुुहुन्छ। दही दहीमा प्रोबायोटिक ब्याक्टेरिया हुन्छ जसले शरीरमा कीटाणु बढ्न दिँदैन। दिनदिनै दही खाने गर्नुभयो भने घरीघरी पिसाब आउँदैन। दिनमा पाँचचोटिसम्म पिसाब आएको ठीकै हो किनकि यसबाट मिर्गौला स्वस्थ रहेको जानकारी पाइन्छ तर १०–१५ चोटि आयो भने चाहिँ खतरनाक पनि हुन सक्छ। छिटछिटो पिसाब आउनु भनेको मधुमेहको पनि लक्षण हुन सक्छ। तपाईंलाई पनि यो समस्या छ भने चिकित्सककहाँ गए
May232022 by Usha Lama AdminNo Comments
जति माझदा पनि दाँत गन्हाउने र पहेंलो नै देखिन्छ ? यसरि सफा राख्नुस्
दाँत हरेक जीवहरुको निम्ति अत्यावश्यक छ ।तर मानिसलाई दाँत केवल कुनै चिज चपाउन मात्र होईन सौन्दर्य बढाउने एक माध्यमको रुपमा पनि पर्न आउँछ ।तपाईहरु मध्य कतिपयलाई दाँत दिनहुँ सफा गर्ने गरेको तर कहिल्लै सेतो नदेखिने या दाँत पहेंलोनै देखिने गरेको छ भने यस्ता विधिहरु अपनाएर दाँतलाई सफा र सुन्दर राख्न सकिन्छ हाम्रो गाउघर तिर नुन र तेल ले दाँत सफा गर्ने चलन अझै पनि छ, नुन मा २(४ थोपा शुद्ध तोरीको तेल मिलाएर दांत सफा गर्ने गर्नाले केहि दिनमै दाँतको पहेलोपना हटेर जान्छ ।केरालाइ पिसेर यसको पेष्ट बनाउनु होस् यसको पेष्टले दांतलाइ दिनहु एक मिनेट मसाज गर्नुहोस, मसाज पछि दांत ब्रश गर्नुहोस र यो उपाए दिनहु गर्नाले दाँतको पहेलोपन हटेर जान्छ चुरोटको सेबन गर्ने गर्नाले पनि दांत पहेलो हुन्छ भने कुनै खानेकुरा लगातार खानाले, उमेर बढ्दै जाँदा अनि धेरै औषधिको सेवन गर्नेहरुको पनि दात पहेलो हुन्छ । तुलसीमा दाँत
May222022 by Usha Lama AdminNo Comments
यो अवस्थामा शरीरका बिभिन्न अंगमा समेत परिवर्तन आउँछ। शरीरमा जुन खालका परिवर्तन आउँछन् त्यसले थुप्रै खालका समस्याहरु समेत निम्त्याउने गर्दछ। महिनावारी हुँदा तल्लो पेट र ढाड दुख्नु सामान्य नै मानिन्छ। महिनावारी हुनुभन्दा केही दिन पहिले शरीरमा भएको रागरसको मात्रामा परिवर्तन आउने गर्दछ। यस्तो रागरसको सहयोगले बच्चा हुर्कनका लागि पाठेघरको भित्र उपयुक्त वातावरण बनिरहेको हुन्छ । यस प्रक्रियाका कारणले पनि तल्लो पेट र ढाड दुख्ने गर्दछ। यदि पाठेघरले निषेचित डिम्ब प्राप्त गरेन भने त्यो निर्माण भएको रगतको तह विस्तारै रगतका रूपमा योनिमार्ग हुदै बाहिर निस्कन्छ र यस बेला पाठेघर खुम्चिने र फुक्ने हुदा यस्तो प्रकारको दुखाइ हुने गर्दछ। यही रागरसको परिवर्तनले गर्दा महिनावारी हुनुअघि कब्जियत हुने, थकाइ लाग्ने तथा कसै कसैलाई डन्डीफोर आउने जस्ता लक्षणहरू पनि देखा पर्दछन्। घरेलु तरिका अपनाएर महिनाव
May102022 by Usha Lama AdminNo Comments
सवारी साधनामा यात्रा गर्दा तपाईंमध्ये धेरैलाई रिँगटा लाग्ने र वान्ता हुने समस्या हुन सक्छ। कतिपय मानिस त झन् वान्ता भएकै कारण बिरामीसमेत हुन्छन्। बस, ट्याक्सी तथा हवाइजहाज चढ्दा आधिकांश मानिस वान्ता गर्छन्। तर कतिपयलाई भने सवारीसाधनको गन्धले नै वान्ता गर्ने पनि हुन्छन्। यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रियहरूले सन्तुलित ढङ्गबाट आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा वान्ता हुने समस्या आउँछ। यसरी यात्रा गर्दा वान्ता हुनुलाई सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता भनिन्छ। यो समस्या हरेक मानिमा फरक–फरक हुन्छ। कोही मानिमा यात्रामा निस्कन साथ वान्ता गर्न थाल्छन् भने कसैकसैलाई लामो यात्रा गर्दा समस्या देखा पर्छ। वान्ता हुनु आफैँमा एक कष्टकर क्षण हो। शरीरलाई कमजोर बनाउनुका साथै यस्तो समस्याले यात्राको रमाइलोपन समेत हराएर जान्छ । यदि तपाइ यस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ भने आफैले केहि घरेलु उपायबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्
May72022 by Usha Lama AdminNo Comments
बिर्यमा प्रजनन क्षमताका लागि आवश्यक शुक्रकीट हुने भएकाले नै यसले बढी नै महत्त्व पाएको छ।सांकेतिक रूपमा हेर्दा जन्मको सुरुवात हुने बीजका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसले पाएको महत्त्व**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**** जायज नै लाग्छ।यो शक्ति आफैंमा ठूलो तथा महत्त्वपूर्ण छपोषणका दृष्टिले हेरिने शक्तिको कुरा गर्दा एकसामान्य व्यक्तिलाई १ हजार ८ सयदेखि २ हजार २ सय क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ र एकपल्टको वीर्य स्ख”लनमा**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**** यस्तै १५ क्यालोरीजति हुन्छ।सम्पर्क गर्दा वा त्यस अघिपछिका शारीरिक क्रियाकलापदेखि उत्तेजना रस निस्कनेस्ख”लनजस्ता कतिपय क्रियाप्रक्रियामा पनि शक्ति क्यालोरी खर्च हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन तर सम्पर्कभन्दा**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**** हस्त”मैथुनमा कम ऊर्जा
ओखर एक प्रकारको ड्राइ फ्रुट हो जसमा ओमेगा थ्री हुन्छ । धेरैजसो मानिस यसको सेवन स्न्याक्सको रुपमा गर्छन् । ओखरमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पाइन्छन् । ओखर खानु पुरुषका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । पुरुषमा स्पर्म काउन्ट बढ्नेदेखि तालुपनाको समस्या कम गर्न ओखर निकै सहयोगी हुन्छ । ओखरलाई तपाईं विभिन्न तरिकाले आफ्नो खानामा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, विशेषज्ञका अनुसार ओखरको एउटा निश्चित मात्रा मात्रै सेवन गर्नुपर्छ नभए पेटमा समस्या हुनसक्छ । यो लेखमा पुरुषका लागि ओखर खानुका फाइदा र यो खाने सही तरिकाबारे कुरा गर्नेछौँ । ओखरमा कुन पोषक तत्व पाइन्छन् ? ओखरमा पाइने पोषक तत्वको कुरा गर्ने हो भने यसमा प्रोटिन, कार्ब्स, फाइबर, फ्याट, फोलिक एसिड पाइन्छन् । ओखरमा फस्फोरस पनि निकै राम्रो मात्रामा पाइन्छन् । ओखरमा बीसिक्स भिटामिन पाइन्छन्, यसले प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ र तपाईं रक्तअल्पत्ताबाट बच्न सक्नुहुन्छ
काठमाडौं, पेटको बोसो कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरमै बसेर तपाईं आफ्नो बेसो घटाउन चाहनुहुन्छ भने यी तरिका अपनाउनुहोस् । १ कागती पानीले दिनको सुरुवातः आफ्नो दिनको सुरुवात कागती पानीले गर्नुहोस् । यो पेटमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसोलाई कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो । मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर थोरै नुन राख्नुहोस्। दैनिक बिहान यसको सेवन गर्दा तपाईंको मेटाबोलिजम एक्टिभ रहन्छ जसले तपाईंको तौल कम गर्न सहयोग गर्छ । २ ब्राउन राइसः सेतो चामलबाट टाढा रहनुहोस् । यदि तपाईंलाई भात नै खानुपर्छ भने सेतो चामलको साटो ब्राउन राइस खानुहोस् । यसका साथै, आहारमा ब्राउन ब्रेड र ओट्सलगायतका खाद्य पदार्थ समावेश गर्नुहोस् । ३ गुलियो खानबाट बच्नुहोस्ः यदि तपाईं बोसो कम गर्न चाहनुहुन्छ भने गुलियो खानबाट बच्नुहोस् । मिठाई, गुलियो पेय पदार्थ, चिल्लो खानेकु
May12022 by Usha Lama AdminNo Comments
जिब्रोको मुख्य कार्य स्वाद लिनु हो । तर, जिब्रोले मानिसको स्वास्थ्यका बारेमा पनि बताइरहेको हुन्छ । यदि जिब्रो स्वस्थ छैन भने त्यसले स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको हुन्छ ।स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्याको संकेत गर्छ जिब्रोले । यदि हामी चिकित्सक कहाँ गयौ भने हाम्रो जिब्रो हेरेर पत्ता लगाउँछन् हामी स्वास्थ्य भए नभएको । जिब्रोको रंग र छालाका आधारमा स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ । डाक्टरले बिरामी जाँच्दा सबैभन्दा पहिले जिब्रो हेर्नु पनि यहीकारण हो । जिब्रोका आधारमा कुनै रोगको अनुमान गरिरहेका हुन्छन् डाक्टरहरु । स्वस्थ जिब्रो – स्वस्थ जिब्रो हल्का गुलाबी, नरम हुन्छ र दागधब्बा पनि हुँदैन । जिब्रो सेतो हुनु – जिब्रोमा बाक्लो सेतो रंग हुनु अपच, एसिडटी र कमजोरीको संकेत हो । पहेंलो हुनु – जिब्रो पहेंलो हुनु चिसो, भाइरल संक्रमणको संकेत हो । त्यस्तै आन्द्रामा समस्या र अपचको समस्याको सं